Gaalkacyo oo aan maanta ganacsi ka jirin | KEYDMEDIA ONLINE
Gaalkacyo oo aan maanta ganacsi ka jirin
Magaalooyin kale oo isla goboolka ah ayaa laga soo sheegayaa bannaan-baxyada, waxaana la filayaa in maanta la qabto mudaharaadyo lagu garab istaaagayo Ciidamada huwanta ah.
GAALKACYO, Soomaaliya - Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xurunta gobolka Mudug, ayaa sheegay in maanta uusan wax dhaqdhaqaaq ganacsi iyo mid waxbarasho ah uusan ka jirin dhanka koofureed ee degmada, kadib amarro xalay ka soo baxay laamaha ammaanka.
Sida ay inoo xaqiijiyeen dad ku sugan dhinaca maaamulka Galmudug, waxaa magaalada ka socda abaabulka bannaanbax weyn oo lagu taageerayo howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, ee ka socda koofurta Mudug.
Dadka shacabka ah ayaa aad uga careysan duullaankii ay shalay Kooxda Al-Shabaab, ku qaadeen degaanka Camaara oo bilaawgii bishaan laga xoreeyay, waxaana bulshada isku soo baxaysa la hadli doona madaxda Maamulka.
Ciidamada Xoogga dalka iyo kuwa Daraawiishta Galmudug, oo iskaashanaya ayaa degaanno badan ka faramaroojiyay Al-Shabaab, Wasiirka Amniga Galmudug, ayaana dhawaan sheegay in ciidanka huwanta ah uu ku wajahan yahay degmada Xarar-dheere ee Gobolka Mudug.